Banyere Anyị - Ningbo Yingyi Machinery Manufacturing Co., Ltd.
ONYE KA ANYỊ?
Ningbo Yingyi Machinery Manufacturing Co., LTD. Bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi na-azụ ahịa mbubata na mbupụ.
Ụlọ ọrụ ahụ na-etinye aka na akụkụ ígwè ọrụ, ngwaahịa ngwaike, Aluminom die-nkedo. zinc anwụ-nkedo na ndị ọzọ metal akụkụ, Stamping akụkụ, Forging akụkụ, Auto Akụkụ, ụgbọ okporo ígwè akụkụ, Valve akụkụ.
Teknụzụ nkedo ndụ ndụ ndụ
URU NDỊ MMADỤ ỤFỌỤ ỤFỌDỤ furu efu
Teknụzụ nkedo ụfụfụ efu furu efu na-ejikọta ụdị rọba ụfụfụ dị ka ọdịdị na ọdịdị nke nkedo ahụ n'ime ụyọkọ ihe atụ, nke a na-ekpuchi ya na mkpuchi refractory na nke a mịrị amị, na-ama jijiji na ájá quartz kpọrọ nkụ, ma wụsa ya na mmiri mmiri n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ iji mee. ihe nlereanya na ọnọdụ okpomọkụ dị elu, mmiri mmiri ígwè na-ekpo ọkụ na lysed. A na-ahapụ gas gbawara agbawa site na mkpuchi, nke mere na ígwè a wụrụ awụ na-anọ n'ọnọdụ nke ihe nlereanya ahụ, na usoro nke ịmepụta ihe nkedo a chọrọ mgbe ọ gbasiri ike ma dị jụụ, maka nkedo ụfụfụ furu efu, e nwere ọtụtụ aha dị iche iche. Na China, anyị na-akpọ "aja akọrọ siri ike nkedo" ma ọ bụ "ihe nkedo na-adịghị mma", ebe USA & Europe na-akpọ "nkedo ụfụfụ efu".
E jiri ya tụnyere teknụzụ nkedo ọdịnala, teknụzụ nkedo ụfụfụ furu efu nwere uru na-enweghị atụ, ya mere a na-eto ya dị ka "teknụzụ nkedo nke narị afọ nke 21st" na "mgbanwe ndụ ndụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe" site na ụlọ ọrụ nkedo n'ụlọ na ná mba ọzọ.
1. Akụkụ nkedo bụ nke ziri ezi na agbanwe agbanwe.
2. Ngwunye elu nkedo dị nro.
3. Ọ dịghị mkpa akụkụ isi ájá ájá, nke ga-emeziwanye àgwà nkedo, ebe nkedo ájá nwere ihe ize ndụ n'ichepụta ihe n'oge ime isi ájá na idozi isi nzọụkwụ.
4. Ma ọ dịghị achọ ebu nso ma ọ bụ ebu na-ewepụ, nke ukwuu mfe ịkpụzi usoro na-ewepụ nkedo ntụpọ na n'efu ngwaahịa kpatara ebu na ịkụ ọkpọ.
5. Ịkpụzi ájá akọrọ na-enweghị ihe nkedo, enweghị mmiri na enweghị ihe mgbakwunye, na-ekpochapụ ụdị dị iche iche nke nkedo ntụpọ na ihe mkpofu na-akpata site na mmiri, ihe mgbakwunye na ihe nkwụnye.
6. A na-eme ka usoro ọgwụgwọ ájá dị mfe nke ukwuu, a pụkwara ịmegharị ájá na-akpụzi kpamkpam ma jiri ya mee ihe ọzọ, kpochapụ ngalaba nkwadebe ájá na-emepụta ihe na ngalaba nlekọta ájá ájá.
7. Aja ịda ada dị oke mfe, na-ebelata oke ọrụ na oke ọrụ nke ájá na-ada.
8. Ihe nkedo ụfụfụ furu efu nwere ịdị arọ kwụsiri ike yana obere ohere iji rụọ ọrụ, nke na-enyere aka ibelata nkedo raw ma belata ọnụ ahịa ya ma e jiri ya tụnyere nkedo ájá ọdịnala.